Ny sain'olombelona dia olombelona, ​​ny faniriana dia ny devoly.
Maniry ny helo ny faniriana hanao firaisana sy ny faniriana fahefana.
Ny afobe dia mibahana amin'ny tontolo ara-batana, libra, firaisana ara-nofo ary amin'ny tontolo ara-tsaina, virgo-scorpio, fanirian'ny endrika.
- Ny Zodiac
Vol. 12 NOVAMBRA, 1910. Tsia
TSY misy teny nanohitra sy nampivarahontsana, sosotra ary natahotra, nampikorontana sy nampangirifiry ny sain'olombelona mihoatra ny eritreritra sy ny teny afobe. Saika ny olona rehetra no mahalala azy, maro no tsy mahay miteny raha tsy misy azy, misy kosa manana broch momba izany, saingy, ivelan'ny fiangonana sy ny fiekena dia vitsy no mieritreritra izany tsy misy fanavakavahana hahitany hoe aiza izy, inona ary izany, ary raha , fa maninona.
Ny hevitry ny afobe dia alain'ny rafitra ara-pivavahana rehetra ary aseho amin'ny teny iray nomen'ny teolojiana an'io fivavahana io. Na ny foko masiaka aza dia mankahala ny eritreritry ny afobe; na dia tsy manana fotoam-pivavahana aza izy ireo dia manantena toerana na toe-javatra izay ampahafantarina ny sainy amin'ny teny iray milaza ny helo.
Ny fisainan'ny afobe dia tonga amintsika manokana indrindra avy amin'ny loharano hebreo, grika ary latinina; avy amin'ny teny toy ny gehenna, sheol, tartaros, hades. Ny teolojiana kristiana dia niverina tamin'ny fanamarihana taloha ary namoha indray, nanalehibe, nandoko, nihaingo, ireo dikany taloha ireny ho lasa sary mahafinaritra sy fahitana, araka ny natolotry ny fahitana ny finoana sy ny antony manosika azy ireo. Koa ny afobe dia voalaza fa toerana iray hidiran'ny fidirana aminy, hisedrana ny fijaliana, ny fampijaliana ary ny fampijaliana ny ambaratonga samihafa sy ny faharetany.
Ny afobe dia voalaza fa toerana hafa amin'ity tontolo ity. Voalaza fa eo afovoan-tany; ary koa, eo amin 'ny faritra ambanin' ny tany, ary, hipetraka eo ambaninay. Voatonona amin'ny teny toy ny lavaka io, ny fasana, ny lavaka na ny fandringanana, ny lavaka tsy misy fotony, ny tany aloka, ny toerana tsy hita maso na ny faritra misy azy, ny fonenan'ny ratsy fanahy. Voalaza fa banga, lava-bato, trano miasa, fonja, toerana fametrahana mangirifiry, fonenana na afenina, toerana fampijaliana, renirano na farihy afo, toerana arahin'ireo fanahy ratsy. Voalaza koa fa lalindalina, maizina, mandevona, tsy manam-petra, tsy mahatsiaro ary manjary tsy manam-pahoriana. Voalaza ho toerana fandoroana afo sy solifara ary tsy misy voky ny olitra.
Ny helo teolojika dia nampiasaina hanaitra ny sain'ny olona ny filàna maika ho azy ireo hahazoana fivavahana ary noho izany dia mandositra ny helo. Saingy tsy mifanohitra amin'ny tenany amin'ny fanomezana ohatra mahavariana ho an'ny olon-dehibe, ireo teolojia dia mazoto miasa amin'ny famaritana ny ankizy sasany amin'ny sampam-panjakan'ny afobe. Amin'ny fanoratany ny sasany amin'ireo sangan'asan'ny Brahmanism dia i Monier Williams dia mampitaha azy ireo amin'ny afobe kristiana ary manonona boky katolika romana ho an'ny ankizy nosoratan'i Rev. J. Furniss. Ilay raim-pianakaviana Reverend, raha ny fanazavany dia tonga hatrany am-bazaha fahefatra izay vilany mangotraka. Hoy izy: "Mihainoa," misy feo toy ny fandrenesana kettle. Mandriaka ny rà ao anaty vodin'ilay tovolahy; mangotraka sy miboiboika ny lohany ao; mahamaina ny taolany ny tsoka. Ary hoy izy nanohy: “Ny dunge fahadimy dia ny lafaoro mafana izay misy ankizy kely. Henoy ny fomba hiaka mivoaka avy eo; jereo fa mihodina izy ary mifamadika amin'ny afo; mikapoka eo an-tampon'ny lafaoro ny lohany. ”Nosoratana ity boky ity mba hahasoa ny ankizy avy amin'ny rain'ny fiangonana katolika romana.
Monier Williams dia manondro mpanoratra iray hafa izay manome fomba fijery feno sy ankapobeny momba ny faran'izao tontolo izao sy ny hiafaran'ny ratsy fanahy. Nanoratra izy hoe: "Mety hamadika ho farihy lehibe na afon-afo lehibe iray izao tontolo izao, izay hihoaran'ny ratsy fanahy, izay ho tafio-drivotra lalandava, izay hatolotr'izy ireo sy hivezivezy tsy manam-pitsaharana alina. . . ny lohany, ny masony, ny fiteniny, ny tanany, ny tongony, ny valahany ary ny fihinany dia ho feno afo mamelatra, afo mandevona, matevina hanalefaka ny vatolampy sy ny singa. ”
Miverina amin'ny antsipirihany, nitan'i Monier Williams avy tao amin'ny toriteny nataon'ny mpitory malaza iray, izay milaza amin'ireo mpihaino azy ireo ny mety ho antenaina ho azy ireo - raha tsy hoe hiditra ao amin'io fivavahana io ihany izy ireo fa ilay arofany ihany no fiarovana. “Rehefa maty ny fanahinao dia hijaly irery; fa ho afobe amin'izany; fa amin'ny Andro fitsarana, ny vatanao dia hikambana amin'ny fanahinao ary hanana kambana kambana ianao; mitete rà mandriaka ny vatanao, ary ketraka ny fanahinao. Amin'ny afo masiaka, mitovy amin'ny antsika eto an-tany, ny vatanao dia ho, tahaka ny asbestos, tsy hoheverina mandrakizay; ny lalanao rehetra amin'ny lalan-dranao mba handehanan'ny tongotra marary; ny fehin-kibo rehetra dia ny tadin-tsetraky ny devoly mandritra ny fotoana tsy voafetra tsy azo ovana. ”
Ity dia filazalazana mamirapiratra sy manaitra amin'ny vanim-potoana maoderina. Saingy rehefa nanjary nohazavaina kokoa ny saina, mihena ny lanjany ny fiadian-kevitra toy izany, ary tsy maintsy mivoaka ny karazan-dàlana toy izany. Raha ny tena izy, miaraka amin'ny isan'ny kolontsaina tsy mitsaha-mitombo hatrany, dia efa mihamalalaka ny finoana ankehitriny: tsy misy afobe. Ka ny fehin-kibo dia mihena avy hatrany amin'ny iray hafa.
Araka ny karazan-tsaina izay tonga amin'ny vatana ara-batana, niova ny finoan'ny olona, ​​nanohitra na momba ny afobe ary hiova tsindraindray. Fa misy ny nanome ary mbola mahatonga ny hevitra sy ny finoana momba ny afobe. Ny helo dia mety tsy ho loko hosodoko. Fa raha tsy misy ny afobe ankehitriny dia tsy nisy afobe, ary ny saina lehibe rehetra izay nifandona tamin'io foto-kevitra io dia niady tamin'ny zavatra tsy nisy, ary ny an-tapitrisany maro lasa izay niaina sy nieritreritra ny afobe niandrandra ary niahiahy ny tenany momba ny zavatra izay tsy mbola nisy akory.
Ny foto-pinoana izay iraisan'ny fivavahana rehetra dia misy zavatra ao anatiny ary marina izay tokony hianaran'ny olombelona. Rehefa esorina ny tarehimarika sy ny asa fresco dia misy mahita ny tena maha-zava-dehibe ny fampianarana.
Ny tena ilaina roa amin'ny fotopampianarana dia, voalohany, mijaly; vokatry ny, faharoa, fihetsika tsy mety. Misy zavatra ao amin'ny olona izay atao hoe feon'ny fieritreretana. Ny feon'ny fieritreretana dia miteny amin'ny lehilahy rehefa tsy manao ratsy. Raha mandà ny feon'ny fieritreretana ny olona dia tsy mety izy. Rehefa manao ny tsy mety izy dia mijaly. Ny fijaliany dia mitovy amin'ny tsy mety atao; ho avy eo na hahemotra araka ny voafaritry ny antony nahatonga ny hetsika. Ny fahalalana ny olombelona momba ny tsara sy ny ratsy ary ny fijaliana efa niainany, dia ireo zava-misy roa ao ambadiky ny finoany any amin'ny afobe. Ireo no mahatonga azy hanaiky ny afobe ara-pôloôlôjia, izay kasaina, namboarina ary napetraka miaraka amin'ny fanaka, fitaovana ary solika, ilaina amin'ny asa tanana.
Manomboka amin'ny rafi-pinoana manahirana mankany amin'ny finoana tsotra amin'ny hazakazaka tsy manam-pahaizana iray, ny tsirairay avy dia mikasa sy manangana ny afobe ho toerana sy miaraka amin'ireo zavatra mety hiteraka korontana sy fanaintainana lehibe indrindra amin'ny mponin'ny afobe. Any amin'ny firenena mafana dia manome afobe mafana ny fivavahana tany. Ny olona miaina amin'ny mari-polar dia misy helo mangatsiaka. Ao amin'ny faritra onjam-pahalemena dia manana tànana mafana sy mangatsiaka ny olona. Ny fivavahana sasany dia miovaova ny isa. Ny fivavahana sasany dia manolotra mpiambina valo sy roa ambiny ho an'ny fizarana sy departemanta mba hananana toerana mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny rehetra.
Ireo antokom-pivavahana taloha dia nanome valiny ho an'ny finoany. Ny tsirairay amin'ireo antokom-pivavahana maro momba ny fivavahana kristiana dia manome afobe, tsy ho an'ireo izay manana ny anaram-piangonana iray ary mino ny fotopampianaran'izy ireo manokana, fa ho an'ireo antokom-pinoana kristiana hafa, ny mpivavaka amin'ny finoana hafa, ary ireo izay tsy mino na tsia. Avy amin'ny tokan-tena miadana sy manana manelanelana ka hatramin'ny marary mafy sy maharitra, dia mino ny fanao isan-karazany sy ambaratonga rehetra.
Ny hevi-dehibe ao amin'ny helo fivavahana iray dia ny devoly. Ny fivavahana tsirairay dia samy manana ny devoly ary ny devoly tsirairay dia miovaova ary endrika fanompoana avy amin'ny devoly hafa. Manokana tanjona roa ny devoly. Naka fanahy sy nampirisika ny olona hanao ratsy izy ary azony antoka fa hisambotra ilay olona manao azy. Ny devoly dia avela avokoa ny fahafahana rehetra tadiaviny amin'ny ezaka ataony mba hakana fanahy ny olona, ​​ary raha mahomby amin'ny ezaka ataony izy dia mahazo ilay olona ho valim-pitaterany.
Ny zava-misy ao ambadiky ny finoana ny devoly dia ny fisian'ny olona faniriana sy ny heriny ary ny fahefana eo amin'ny sainy. Ny faniriana ao amin'ny olona no mpaka fanahy azy. Raha manaiky ny faniriana tsy fanarahan-dalàna ny olona - tsy ara-dalàna araka ny faritanin'ny feon'ny fieritreretany sy ny fitsipi-pitondran-tena ananany, dia voatana ao amin'izany faniriana izany izy ireo, toy ny voalaza fa ny devoly no mitazona ny olom-peheziny. Araka ny faniriana sy fanaintainana be dia be amin'ny faniriana tsy voafehy, dia maro ihany ny devoly sy ny mpiaro ary ny fomba hijaly.
Ny sain'ireo zaza sy ny tsy matoky ary ny tahotra dia nesorina sy tsy nanam-potoana ho amin'ny toerany eo amin'ny fiainana amin'ny alàlan'ny fotopampianaran'ireo mpiambina teolojika. Nomena tsiny Andriamanitra ary ny devoly manendrikendrika ny mpanoritra fatratra, izay midika na manala baraka ny foto-pinoana.
Tsy mety ny mampihorohoro ny reny sy ny zanaka ary ny mampatahotra ny olona amin'ny foto-pinoana mahatahotra momba ny afobe. Fa tsara tokony ho fantatry ny rehetra ny momba ny helo, aiza, inona, ary inona no antony, ary inona no tokony hifandraisan'ny olombelona. Betsaka ny tena marina amin'ny filazalazana ankapobeny momba ny mpiaro teolojika, fa ny fotopampianarany sy ny fiovan'ny toetrany dia nanjary voadaba, tafalentika, mihena, tsy manintona, fa ny saina dia manohitra, maneso, mandà tsy mino na tsy miraharaha ireo fotopampianarana.
Ny helo dia tsy sazy mandrakizay, na ho an'ny vatana na ny fanahy. Ny helo dia tsy toerana iray izay hitsanganan'ny "fitsaram-bahoaka" ny vatan'olombelona ary hatsipy any amin'ny toerana handoroany mandrakizay ary tsy hanjary mandrakizay. Tsy any amin'ny afobe ny afobe, ary mandehandeha hahazo fijaliana ny zaza sy ny fanahin'ny zaza tsy vita batemy. Ary tsy toerana iray ahazoan'ny sain'ny saina sy ny fanahy ny fanasaziana na inona na inona satria tsy niditra tao an-tratran'ny fiangonana izy ireo na nanaiky ny finoana sasany na fanekem-pinoana manokana. Ny helo dia tsy toerana na loaka, na loaka, na fonja, na farihy amin'ny setroka mirehitra izay amonoan'ny vatan'olombelona na fanahy aorian'ny fahafatesana. Ny helo dia tsy toerana hahafaha-milamina na hanary andriamanitra tezitra na be fitiavana, ary izay anamelohany azy ireo izay tsy mankatò ny didiny. Tsy misy fiangonana manana monopolole ny helo. Ny helo dia tsy tombontsoan'ny fiangonana na fivavahana.
Ny afobe dia manana fahefana amin'ny tontolo roa; ny tontolo ara-batana sy ny tontolo astral na psychic. Ny dikan-tenin'ny fotopampianaran'ny helo dia mihatra amin'ny tontolo iray na amin'ny tontolo roa. Ny afobe dia azo ampidirina sy traikefa mandritra ny tontolo ara-batana ary ny traikefa dia azo ampitarina ao amin'ny tontolon'ny astral na psikôlôjia mandritra ny fiainana ara-batana na aorian'ny fahafatesana. Saingy tsy mila izany ary tsy tokony hampahatahotra na mampatahotra. Izy io dia voajanahary ary mifandimby amin'ny fiainana sy ny fitomboana eo amin'ny tontolo ara-batana. Ny fanjakan'ny helo ao amin'ny tontolo ara-batana dia mety takatry ny saina izay tsy ampy ady ary tsy maizim-pito ho voasakana amin'ny fahalalana. Ny fanjakan'ny helo amin'ny tontolon'ny saina sy astral dia mety ho azon'ny olona iray ihany koa izay tsy manizingizina fa tsy misy astral na psychic ary tsy mino fa ny faran'ny fahafatesana dia mifarana ary tsy misy fanjakana ho avy aorian'ny fahafatesana.
Ny olona tsirairay dia hisy hanaporofo ny fisian'izany zavatra izany izay lazain'ny teny hoe helo. Ny fiainana ao amin'ny tontolo ara-batana dia hanaporofo izany amin'ny lehilahy rehetra. Rehefa miditra amin'ny tontolon'ny ara-tsaina ny olona ny traikefany dia hisy porofo iray hafa. Tsy ilaina anefa ny miandry ny olona mandra-pahafatiny ka hiaina any amin'ny helo astral na psychic. Izany fanandramana izany dia mety ho niaina tamin'ny niainany tao anatin'ny vatany. Na dia mety ho traikefa aorian'ny fahafatesana aza izao tontolo izao ara-tsaina dia tsy afaka am-pahalalana izany. Mety ho fantatra sy arahin-tsaina izany raha miaina amin'ny vatana vatana ny olona ary alohan'ny ahafatesana.
Ny helo dia tsy terena na maharitra. Miova ny kalitao sy ny habetsahany. Ny olona dia afaka hikasika ny sisintanin'ny helo na hijery ny misterin'ny halaliny. Tsy hijanona na tsy hahalala na hianatra avy amin'ny zavatra niainany izy arakaraka ny fahalemena na ny fahantrana sy ny fahaizan'ny sainy ary arakaraka ny fahavononany hiatrika ny fitsapana ary hanaiky ny zava-misy araka ny zavatra hitany.
Toa misy helo roa eto amin'izao tontolo izao. Misy ny afobe manokana, izay manana ny toerany ao amin'ny vatany. Rehefa mihetsika ny afobe ao amin'ny vatany dia mamorona fanaintainana izay efa zatra ny ankamaroan'ny olona. Avy eo dia misy ny helo ankapobeny na fiaraha-monina, ary misy ny anjarany tsirairay. Tsy hita ny afobe, ary raha tsy izany dia hita fa miharihary ary ho olona iray manontolo. Tsy misy firesahana maranitra.
Rehefa manohy mikaroka ny olona dia hahita fa ny "devoly sy ny anjeliny" dia mety ho raisina - na tsy endrika ara-batana aza. Ny devoly ny helo manokana dia ny faniriana lehibe sy manjaka. Ny anjelin'ny devoly, na ny devoly kely, dia ny filana, ny filana, ny fahazaran-dratsy ary ny filan-dratsy izay mankatò sy manompo ny tena faniriany, dia ny devoly. Ny faniriana voalohany dia nohamafisin'ny tafik'ireo devoly kely, ny faniriana ary omena fahefana izy ary avela hanjaka amin'ny saina. Raha nomena izy na avela hanjaka dia tsy jerena ny devoly ary mijanona ho tsy fantatra ny afobe na dia eo aza ny fanjakana mavitrika. Raha toa ka mankatò ny olona dia manao paraggame na manala baràka na manaiky ny faniriany sy ny filàny dia tsy fantatra ny devoly sy ny helo.
Na dia mamakivaky ny sisin-taniny aza ny olombelona ary mahatsapa ny fanaintainan'ny sasany hita any am-pitan'ny sehatra, tsy fantatra ny sandany marina ary izy ireo dia raisina ho toy ny fahantrana eo amin'ny fiainana. Koa fiainana aorian'ny fiainana dia miditra ao amin'ny tontolo ara-batana ny olombelona ary manandratra ny faritry ny afobe izy ary mankafy fahafinaretana kely ary mandoa ny vidiny na sazy any amin'ny afobe. Na dia mety hiditra amin'ny sehatry ny sehatra izay tsy ahitany izy ary tsy mahalala izany dia ny helo. Koa ny helo dia mijanona ho tsy hita ary tsy fantatry ny olona. Ny fijalian'ny helo dia manaraka ny fanoloran-tena tsy ara-dalàna, tsy fanarahan-dalàna ary manafintohina ny fanirian'ny nofo sy ny faniriana, toy ny gluttony ambany, ny fampiasana zava-mahadomelina sy ny alikaola ary ny fahasamihafana sy fanararaotana amin'ny firaisana ara-nofo. Isaky ny vavahadin'ny helo dia misy fampandrenesana hiditra. Ny mahafa-po dia ny fahatsapana fahafinaretana.
Raha mbola manaraka ny firafitra sy faniriana voajanahary ny olona dia tsy hahalala zavatra betsaka momba ny afobe izy, fa hiaina fiainana voajanahary miaraka amin'ny fahafinaretana voajanahary miaraka aminy ary amin'ny fikasihan'ny afobe indraindray. Saingy ny saina tsy ho afa-po hamela ampahany na fanjakana amin'ny tontolon'ny tontolo tsy niasa. Ka amin'ny tsy fahalalany dia manohitra ny lalàna ny saina indraindray ary rehefa miditra ny afobe dia tafiditra. Ny saina mikatsaka fahafinaretana dia azony. Rehefa manohy mankafy ny saina, izay tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny taova samirery, dia ho lasa malemy; very ny faneken'izy ireo ary mitaky famporisihana bebe kokoa; ka ny saina no entanina izy ireo hanao bebe kokoa ny fahafinaretana. Mikatsaka fitadiavana fahafinaretana bebe kokoa, ary miezaka mampitombo ny fahafinaretana, manohitra ny lalàna ary farany dia nahazo ny sazy marina momba ny mijaly sy ny fanaintainana. Niditra ho any afobe izy io. Ny saina dia afaka mivoaka avy amin'ny helo rehefa mandoa ny sazin'ny mijaly vokatry ny tsy fanarahan-dalàna nahatonga izany. Saingy ny saina tsy misaina dia tsy mety manao an'io ary miezaka miala amin'ny fanasaziana. Mba hialana amin'ny fikoropahana, ny saina dia mitady ho antitony misimisy ihany koa ary tazomina any amin'ny fifadian-kanina any amin'ny afobe. Noho izany ny saina avy amin'ny fiainana mankany amin'ny fiainana dia manangona, mampifandray amin'ny rohy, rojo vy trosa. Ireo dia eritreretin'ny eritreritra sy ny asa. Ity no gadra ifatorany ary ifamatoran'ny faniriany ny fanapahana, dia ny devoly. Ny niheverana rehetra fa ny lehilahy dia nandeha teny amin'ny sehatry ny helo ary nisy kosa niditra tsara tamin'ny mistery. Saingy vitsy ireo no nahalala ny fomba na nahitana fandinihana, noho izany dia tsy fantatr'izy ireo ny halavany, na tsy fantatr'izy ireo ny lalana tokony hivoaka.
Na hainy io na tsia, dia ny afobe izay mieritreritra ny hiaina ao amin'ny tontolo ara-batana. Saingy tsy ho hita marina ny afobe ary tsy ho fantatry ny devoly amin'ny fomba voajanahary tsotra sy tsotra izy. Mba hahitana ny helo ary mahalala ny devoly dia tsy maintsy manohy manao izany amim-pahalalana, ary tsy maintsy miomana handray ny vokatr'izany. Ny vokatr'izany dia eo am-piaretana mijaly, izay mitombo hatrany. Fa amin'ny farany dia misy ny fahalalahana. Tsy mila milaza amin'ny olona intsony ny olona fa hahita ny helo izy ary hibaiko ny devoly. Afaka ary tsy maintsy manao izy roa mandritra ny fiainana eto amin'izao tontolo izao.
Mba hahitana ny helo ary hihaona amin'ny devoly dia tsy maintsy manohitra sy mandresy ary mifehy ny faniriany hitondra. Saingy tsy matetika ny fanambin'ny olona ny faniriana lehibe sy fanapahana ny toetrany. Io faniriana lehibe io dia mitoetra ao ambadika, fa izy no lehiben'ny anjeliny, ny devoly kely, ny faniriana kely kokoa. Noho izany, ny olona, ​​rehefa mandà ny devoly izy dia hihaona amin'ireo kapiteny na iray ihany. Fa na ny manasaraka ny iray amin'ireo dia ampy hanomezana ady lehibe ho an'ny mpifaninana.
Ny fiainana iray manontolo dia azo raisina amin'ny fandresena sy hifehezana ny faniriana kely kokoa. Amin'ny ady sy ny fandresena ny faniriana manokana, na ny fandavany ny fanjakazakan'ny asa sy ny fanatanterahana ny fanirian-dratsy, dia misy olona mandresy ny anjelin'ny devoly iray. Na dia tsy mifanena amin'ny devoly lehibe aza izy. Ny faniriana lehibe, ny devoly tompony, dia mijanona lavitra any aoriana, fa naseho azy tamin'ny lafiny roa: ny firaisana ara-nofo sy ny fahefana; manome azy ny helo izy ireo - aorian'ny fahafinaretana. Ireo roa ireo, ny firaisana ara-nofo sy ny fahefana, manana ny fiaviany ao anatin'ny mistery noforonina. Amin'ny alàlan'ny fandresena sy ny fifehezana azy ireo am-pahakingana dia mamaha ny olan'ny fisiany ary mahita ny anjarany ao anatiny.
Ny fiezahana tapa-kevitra ny handresena ny fanirian'ny tompona dia fanamby ary fiantsoan'ny devoly. Ny tanjon'ny firaisana dia firaisana. Mba hahafantaranao ny firaisana dia tsy tokony ho resin'ny faniriana firaisana ny olona. Ny tsiambaratelo sy ny tanjon'ny fahefana dia ny fanatanterahana ny faharanitan-tsaina izay manampy ny rehetra. Mba ho manan-tsaina amin'izany fomba izany dia tsy maintsy mandresy ny olona ary lasa tsy voavonjy amin'ny faniriana fahefana. Ny olona voafehin'ny faniriana ara-pananahana na ny faniriana fahefana dia tsy mahalala hoe inona ny firaisan-tsaina na izay fitsikilovana mahasoa. Avy amin'ny zavatra niainany hatramin'ny fiainam-piainana dia mikatsaka fivoarana ny saina, amin'ny alàlan'ny fizotran-tsaina na amin'ny faniriana ny andriamanitra ary na izy roa. Raha mitohy ny fandrosoana ny saina amin'ny fivoarany dia miatrika zava-tsarotra maro izy ary tsy maintsy apetraky na manafintohina ny maro amin'ireo fiadanam-panahy sy ny mahasarika ny saina. Ny fitomboan'ny fitomboana sy ny fanirian'ny saina dia tsy azo ihodivirana, mahatonga azy hirotsaka amin'ny ady lehibe miaraka amin'ny devoly, ny ady amin'ny firaisana ara-nofo, ary aorian'izany, ny fanekena farany ny devoly amin'ny alàlan'ny fandresena ny faniriana fahefana.
Ny mystika sy ny saika dia mampiseho sy nanoritsoritra ny saina nanao ady, tamin'ny alàlan'ny sary na famaritana toy ny an'i Laocoon, ny asan'ny Hercules, ny angano an'i Prometheus, ny angano volon'ondry volamena, ny tantaran'i Odysseus, ny angano nataon'i Helen an'i Troy.
Betsaka ny mistika niditra tao amin'ny afobe, nefa vitsy ihany no mandresy sy mizaka ny devoly. Vitsy no vonona na afaka manohy ny ady taorian'ny seta voalohany-any ary rehefa avy nokapohina sy nokapohina tamin'ny alàlan'ny tontolon'ny devoly faniriana hanao firaisana sy faniriana fahefana izy ireo dia nomen'izy ireo, nanary ny tolona, ​​nokapohina , ary nijanona ho faniriany foana izy ireo. Nandritra ny tolona dia nijaly tamin'ny ankamaroan'ny giazy ry zareo satria vonona ny hijoro. Rehefa avy nampidirina izy ireo dia maro no nihevitra fa resiny noho ny ambiny taorian'ny tolona ary noho ny fahombiazana sasany izay manaraka ho valim-pitiavana aorian'ny ady. Ny sasany dia nanameloka ny tenany ho mpanonofy malaina sy adala noho ny firotsahany hanao fihetsika maneso na tsy azo atao. Tsy misy famantarana famantarana ny fahombiazana rehefa niady sy nandresy ny devoly ary nandalo tao amin'ny afobe. Fantany izany ary ny pitsopitsony rehetra mifandray aminy.
Ny karazana na halehiben'ny afobe dia mijaly na mampijaly amin'ny vatana vatana. Rehefa eo amin'ny fahasalamana sy fiononana ny vatana vatana dia tsy misy eritreritra na hevitra avy amin'izany helo. Navela hijanona eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fiononam-po ity rehefa mikorontana ny fiasan'ny vatana, mandratra ny vatan'ny vatana, na rehefa tsy afa-po ny filan'ny vatana. Ny hany karazana afobe ara-batana azon'ny olona iainana dia tsapa mandritra ny miaina an'ity tontolo ity. Miaina ny helo ara-batana ny olombelona vokatry ny hanoanana sy ny fanaintainana. Rehefa manomboka ny hanoanana ny sakafo dia manomboka ny hanoanana ary mihamangatsiaka hatrany satria nolavina tsy ho sakafo ny vatana. Ny vatana matanjaka sy salama dia mora kokoa amin'ny fanaintainan'ny hanoanana noho ny olona efa mihamafana sy efa mihasimba. Raha nolavina ny sakafo dia miantso ho an'ny sakafo ny vatana ary mitaky ny sakafo ny saina, mampiavaka ny saina ary manamafy ny hanoanana amin'ny fiheverana ny sakafo izay tsy ananany. Raha mbola mieritreritra ny saina dia mihamafy ny fanaintainan'ny vatana ary mihamalalaka ny olona isan'andro. Lasa mosary ny hanoanana. Manjary mangatsiaka na tazo ny vatana, voatsindrona ny lela mandra-pahatongan'ny vatana ho lasa ratra matevina ary mandritra izany fotoana izany ny saina dia mahatonga ny fanaintainan'ny vatana ho mafy kokoa noho ny fisainana ny filan'ny vatana. Ny iray izay mahatonga ny fifadian-kanina amin'ny fifadian-kanina dia tsy mahatsapa afobe afa-tsy amin'ny dingana malefaka indrindra, satria an-tsitrapo ny fifadian-kanina ary ho an'ny tanjona sasany ary nokendren'ny saina. Amin'ny fifadian-kanina an-tsitrapo, ny saina dia tsy mampitombo ny hanoanana amin'ny fanolorana ny faniriana sakafo. Mamerina ny eritreritra ary manentana ny vatana hihazona mandritra ny vanim-potoana nokasaina, ary matetika ny saina dia milaza amin'ny vatana fa hanana sakafo izy rehefa tapitra ny fifadian-kanina. Tena hafa noho ny helo miaritra amin'ny mosary tsy manao asa izany.
Ny olona salama dia tsy mahatakatra hoe inona ny afan'ny fanaintainana ara-batana raha tsy efa manana traikefa toy izany toy ny aretin'andoha mitsoka. Raha manana maso manindrona izy, tapaka ny valanoranony, sady mifoka mafy no mavesatra; raha latsaka ao anaty vongan-dronono mangotraka izy na very an-doha, na raha voan'ny kansera mihinana amin'ny tenda izy, ny trangan-javatra rehetra nateraky ny lozam-pifamoivoizana lazaina ary feno ny gazety, ny traikefa toy izany dia hahatonga ny iray any amin'ny helo . Ny hamafin'ny afony dia araka ny fahaizany sy ny fahaizany mijaly, ary koa ny fanamafisana ny fijalian'ny vatana amin'ny fisainana mahatsiravina sy saro-pady, toy ny nitranga tamin'ireo niharan'ny fanenjehana espaniola. Ireo izay mahita azy dia tsy hahalala ny afobe na dia mahazo famindram-po aza izy ireo ary manao izay azony atao. Raha mankasitraka ny afony dia tsy maintsy mametraka ny tenany eo amin'ny toeran'ny marary fa tsy resin'ny fanaintainana. Rehefa avy eo ambonin'izay olona niaritra izany helo izany dia mety hanadino azy, na hanao fahatsiarovana azy fotsiny.
Tsy misy izany na fanjakana aorian'ny fahafatesana dia ny afobe teolojiana, raha tsy afaka mitondra miaraka aminy ny sary noloko nandritra ny fiainany ara-batana ny mpanao sary. Sarotra indrindra izany; fa na dia afaka aza, ny hafa noho izy tsy hanandrana azy ireo. Ny fehin-tsary dia tsy misy afa-tsy amin'ny olona nandoko azy ireo.
Ny fahafatesana dia mandeha ho azy amin'ny fahaterahana. Ireo fanjakana aorian'ny fahafatesana dia ara-boajanahary sy mifandimby toy ny fitomboan'ny fitomboan'ny vatana vatana. Ny fahasamihafana dia, manomboka eo amin'ny fahazazana ka hatramin'ny maha-lehilahy manontolo, dia misy mitambatra, mifanambana, avy amin'ireo olom-peo rehetra noforonin'ny olombelona; raha, na aorian'ny fahafatesana aza dia mihena tsikelikely ao an-tsain'ny eritreritra rehetra ny ampahany rehetra sy ny fahatsapana ary ny fiverenana amin'ny tsy fahadiovam-pitondran-tena.
Ny saina izay mifikitra indrindra amin'ny filan'ny nofo ary mankasitraka indrindra azy dia hanana ny helo mafy indrindra. Ny afobe dia mitoetra ao amin'ny fisarahana ny saina amin'ny faniriana sy fahatsapana, ao aorian'ny fahafatesana. Ny helo dia mifarana rehefa misaraka ny saina manaja ny filan'ny nofo izay mifikitra amin'izany. Indraindray dia maty, fa tsy foana, fitohizan'ny maha-olona mitovy ihany amin'ny fiainana ara-batana. Ny saina sasany dia matory mandritra ny fotoana iray aorian'ny fahafatesana. Ny fisainan'ny olona manokana izay mitana ny heviny fa izy ireo dia miankina amin'ny fahatsapana fa ny afobe no mahery indrindra. Manomboka ny afobe maty raha vao afaka ny vatana ara-batana ny saina ary mitady ny haneho ny heviny manjaka indrindra amin'ny fiainany taloha. Ny faniriana mpitondra amin'ny fiainana, nohamafisin'ny faniriana kely rehetra dia nanambara ny fifantohan'ny saina ary manery ny saina hanaiky sy hanaiky ny tsy fivadihany. Saingy tsy afaka ny saina, satria hafa izy io ary mitady ny fahalalahana amin'ny faniriana toy ny tsy mifanaraka amin'ny fomban-drazana sasany mandritra ny fiainana nefa tsy afaka naneho izany. Ny helo dia maharitra mandritra ny fotoana takian'ny saina hanafaka ny faniriana izay manakana azy, ny saina, tsy hikatsaka ny fanjakany. Mety vetivety ihany io fe-potoana io na mety haharitra ela. Ny vanim-potoana, ny fanontaniana momba ny faharetan'ny helo, dia izay nahatonga ny afobe teolo mandrakizay na tsy manam-petra. Ny teolojiana dia manombatombana ny vanim-potoana hiainan'ny afobe - toy ny fanitarana tsy misy fetrany momba ny fotoana ao amin'ny tontolo ara-batana. Ny ora ara-batana, na ny fotoana eo amin'ny tontolo ara-batana, dia tsy misy amin'ny fotoana rehetra aorian'ny fahafatesana. Ny fanjakana tsirairay dia samy manana ny mari-potony manokana. Araka ny hamafin'ny fahatsapana mahatsiravina na ho ela ao anatin'ny fotoana fohy ny fahanterana na ny fotoana maharitra. Raha ny eritreritra feno momba ny hetsika haingana, ny mandrakizay dia mety ho traikefa vetivety. Ny saina maloto sy adala dia mety mitaky fotoana maharitra any amin'ny afobe. Mistery lehibe noho ny afobe ny fotoana.
Ny saina tsirairay dia tompon'andraikitra amin'ny afobe lava na fohy aorian'ny fahafatesana ary koa eo amin'ny fiainana. Mandritra ny vanim-potoana aorian'ny fahafatesana ary alohan'ny ahafahany mihoatra ny helo, ny saina dia tokony hihaona ary handresy ny devoly. Araka ny tanjaky ny saina sy ny famaritana ny saina, ny devoly dia hanao endrika ary ho hitan'ny saina. Saingy tsy afaka mamorona endrika ny devoly raha tsy afaka manome azy ny saina. Ny devoly dia tsy mihetsika mitovy amin'ny eritreritra rehetra. Samy manana ny devoly ny sainy tsirairay. Ny devoly tsirairay dia mifanentana tsara amin'ny kalitao sy ny hery ao an-tsaina. Ny devoly dia ny faniriana nifehy ny faniriana rehetra vao nifarana, ary ny endriny dia endrika miforitra izay eritreritry ny eritreritr'izao tontolo izao sy ara-nofo amin'izany fiainana izany. Raha vao takatry ny saina ny devoly dia misy ny ady.
Ny ady dia tsy avy amin'ny tadin-kirihitra, kotroka sy tselatra, afo ary solifara, tahaka ny vatana sy ny fanahy. Ny ady dia eo anelanelan'ny saina sy ny faniriana. Ny saina dia miampanga ny devoly ary ny devoly dia miampanga ny saina. Ny saina no mibaiko ny devoly handeha, ary ny devoly mandà. Manome antony ny saina, mamaly ny devoly amin'ny alàlan'ny fanehoana ny faniriana izay sazin'ny saina mandritra ny fiainana ara-batana. Ny faniriana sy ny asa rehetra raisin'ny saina na ny fanekena mandritra ny androm-piainana dia tsy mihetsika ao an-tsaina. Miteraka fampijaliana ny faniriana. Io fijaliana io dia ny afobe sy ny solifara ary ny fampijaliana izay nolavin'ny teolojiana ho ao anatin'ny fiarovany teolojika. Ny devoly no faniriana fiainana, natsangana ho endrika. Ireo endrika maro nomen'ny fiangonana samihafa tamin'ny devoly dia noho ny karazana devoly sy ny faniriana, omena endrika aorian'ny nahafatesan'ny olona maro.
Ny fivavahana sasany amin'izao androntsika izao dia tsy dia jerena loatra toy ny taloha. Ny sasany tamin'ireo fivavahana taloha dia namela ny saina hiala ao amin'ny helo fa hahazo ny valisoany amin'ny soa izay nataony fony teo amin'ny fiainana ara-batana. Ny anaram-piangonana iray amin'ny finoana Kristiana dia mitazona ny devoly ary mamela ny olona hivoaka amin'ny helo, raha ny namany dia handoa ny onitra azony sy ny torohevitra ao amin'ny fiangonana. Saingy tsy tokony hisy raharaha izay raisina ho an'izay olona tsy mahay nanao an'io fiangonana io alohan'ny hahafatesany. Tsy maintsy mijanona ao amin'ny helo foana izy, ary ny devoly dia mety hanao aminy araka ny sitrapony, hoy izy ireo. Ny anaram-piangonana hafa dia mampihena ny fidiram-bolany amin'ny hentitra kokoa amin'ny fanapahan-keviny. Tsy misy na raharaham-barotra na fomba hafa ivelan'ny helo. Raha miditra ianao dia tsy maintsy mijanona. Miankina amin'ny tsy hinoanao na tsy hino ny fitsipiky ny fiangonana tsirairay ireo na miditra na mijanona ianao.
Fa na inona na inona lazain'ireo fiangonana, ny zava-misy dia rehefa avy ny devoly, ny faniriana mamorona, no nampiseho sy niampanga ny sain'ny fahadisoana rehetra nataony nandritra ny fiainana, ary taorian'ny niaretan'ny saina ny fanaintainana nateraky ny faniriana mirehitra. dia tsy afaka mitazona ny saina intsony ny devoly, ny fiombon-tsaina miasa ary misy ny fiafarany an'io helo io. Mandeha ny saina mankafy ny fotoam-pialan-tsasatra na manonofy amin'ny alàlan'ny foto-keviny, fiomanana amin'ny fiverenany any amin'ny tontolo ara-batana hanombohana indray ny fotoam-pianarana iray ao amin'ny kilasy misy azy. Ny devoly dia mijanona ao anatin'ny faniriany mandritra ny fotoana kelikely, fa izany fanjakana izany dia tsy avy eo afobe noho ny faniriana. Tsy manana eritreritra, ny devoly dia tsy afaka manohy toy ny endrika ary toy izany koa no raisina tsikelikely ho an'ny hery faniriana manokana izay namoronana azy. Izay no fiafaran'io devoly manokana io.
Ny helo sy ny devoly dia tsy tokony hoheverina amin-tahotra sy hovitra. Ny helo sy ny devoly dia tokony hieritreritra izay rehetra afaka mieritreritra sy manana fahalianana momba ny fiaviany sy ny ho avy. Ambaraboo amin'ireo izay mbola mijaly noho ny kofehy nomen'ny sainy azy izy amin'ny fampiofanana voalohany. Azontsika antoka fa raha misy ny afobe sy ny devoly dia tsy afa-mandositra azy ireo isika amin'ny fiezahana mandositra sy tsy mijanona ho tsy mahalala azy ireo. Arakaraka ny ahafantaran'ny devoly sy ny helo ny tsy atahorany azy ireo. Aza atao tsinontsinoavina raha azontsika atao, fa hitohy mandra-pahafantarantsika azy ireo ary hofoanantsika.
Fa nahoana ny saina no tokony hijaly any amin'ny helo, ary inona ny tanjon'izany? Mijaly ny afobe ny saina satria tsy nahavita nifehy tena, satria tsy nivelatra, namboarina sy namboarina sy nahitsy ny tsirairay ny fahaizany, satria misy eo aminy izay tsy fahalalana, izay manohitra ny filaminana sy ny firindrana, izay mahasarika fihetseham-po. Ny saina dia hanaiky ny helo mandra-pivoarany sy manitsy ny fahaizany, manolo ny tsy fahalalana amin'ny alalàn'ny fahalalana ary mahafehy tena.
Ny tanjon'izao tontolo izao sy ny faniriana, ny devoly, dia ny hampiasa sy hanabeazana ny saina amin'ny fanomezana ny traikefany amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan-tena, mba hanavahana ny fiheveran'ny fahaizany manokana sy ny vokatry ny fahatsapana, ary amin'ny alàlan'ny fandresena ny fanoherana. atolotry ny faniriana ny fahaizan'ny saina dia mivoatra, ary noho izany dia tonga amin'ny fahatakarana sy ny fahaizany ny tenany ary avy amin'ny fahaiza-manaony ny fahalalana, ary ny fahalalahana. Tsy misy traikefa, tsy misy fahatsapana; tsy fahatsapana saina, tsy misy fijaliana; tsy misy fijaliana, tsy misy fanoherana ary tsy misy fanoherana tsy mahafehy tena; tsy manam-pahalalana, tsy manam-pahalalana; tsy manam-pahalalana, tsy misy fahalalahana.
Ny helo dia omen'ny saina noho ny faniriana, izay herin'ny biby jamba sy tsy mahalala ary manintona ny fifandraisan'ny saina, satria ny fiteniny amin'ny alàlan'ny fahatsapana azy dia afaka mihamafy amin'ny saina fotsiny. Ny faniriana mankafy ny fanaintainana toy ny fahafinaretana, satria manome fahatsapana izany ary mahafinaritra ny fahatsapana fahafinaretana. Ny sakramenta dia tsy mahafaly ny saina, ny saina avo kokoa, fa tsy tonga nofo.
Ny helo no tanin'ny sain'ny saina sy ny faniriana. Ny helo sy ny faniriana tsy toetran'ny saina. Raha ny saina manana ny natiora faniriana dia tsy hanome afobe na hijaly ao an-tsaina ny faniriana. Miaina amin'ny helo ny saina satria tsy mitovy ary tsy mitovy amin'ny an'ny mpanao afobe. Mijaly anefa izany satria nandray anjara tamin'ny hetsika izay nahatonga ny helo. Ny fijalian'ny saina dia maharitra mandritra ny vanim-potoana izay ilana azy hanavaka azy izay tsy mitovy amin'ny azy. Amin'ny fanafahana ny tenany amin'ny faniriana sy ny helo aorian'ny fahafatesana dia tsy hahita fahalalahana mandrakizay.
Ny antony tsy maintsy ifandraisan'ny saina sy fiasana miaraka amin'ny faniriana, izay tsy mitovy ary tsy izany, dia misy kalitao iray ao amin'ny fahaiza-manaon'ny saina izay toetran'ny faniriana. Ity kalitao ity dia ny mazoto mampiorina ny saina. Ny fahamaizinana ao an-tsaina dia ny ao anaty sy ny saina izay mahatonga ny faniriana mahasarika ny saina. Ny mazoka mainty dia ny fahaiza-misaina tsy misy fotony ary ilay mahatonga ny alahelo hitranga amin'ny saina. Ny saina no mahasarika ny faniriana noho ny haizin'ny saina ao an-tsaina. Ny fiainana mahatsapa sy miaina ao anaty vatana ara-batana, ary ny fitsipiky ny faniriana an'izao tontolo izao, dia manana fahefana amin'ny saina. Rehefa mandresy sy mibaiko ny fahaizany maizina ny saina, ny faniriana dia tsy hanan-kery ao an-tsaina, dia hohamaizina ny devoly ary tsy hijaly any amin'ny helo intsony ny saina, satria tsy misy na inona na inona handoro ny afon'ny afobe.
Ny fahafahana amin'ny helo, na ny devoly, na ny fijaliana, dia tsy azo raha tsy ao anatin'ny vatana ara-batana. Ny helo sy ny devoly dia resin'ny saina aorian'ny fahafatesana, fa vetivety ihany. Ny ady farany dia tsy maintsy raisina alohan'ny hahafatesany. Mandra-pandresena ny ady farany dia tsy ho fantatry ny saina ny tenany ho tsy mitsahatra mahatsiaro ny fahalalahana. Ny saina tsirairay dia hanana fiainana ara-batana amin'ny ady iray ho an'ny fahalalahana. Mety tsy hitranga amin'ny fandresena izany fiainana izany, fa ny fahalalana azo amin'ny alàlan'ny traikefany amin'ny tolona dia hanampy ny tanjany ary hahatonga azy ho mendrika kokoa amin'ny tolona farany. Miaraka amin'ny ezaka mitohy dia tsy maintsy hisy ny ady farany ary handresy amin'ny tolona izany.
Ny faniriana na ny devoly dia tsy manery ny tolona farany. Rehefa vonona ny saina dia manomboka izany. Raha vantany vao resin'ny faniriana ny faniriana ary tsy manaiky ny fanolorany ny faniriana izay fantany fa tsy tokony hamela azy dia hiditra ao amin'ny helo izy. Ny helo dia toe-piainan'ny saina ao anatin'ny fiezahana handresena ny tsy fahalalany ny tenany, hahazoana fifehezan-tena sy fahalalana. Rehefa miorina tsara ny saina ka tsy mamoa dia lasa mavitrika ny devoly ary mampiasa ny diadiny ary mirehitra mafy hatrany ny afon'ny afobe. Saingy raha tsy avela tanteraka ny ady dia alaina tanteraka ny alahelo, ny nenina sy ny alahelon'ny saina noho ny nanolorany azy sy ny tsy fahombiazany toa tsy nahomby. Rehefa manavao ny tolona na manohy mijanona eo amin'ny toerany izy rehetra, ny hetra rehetra dia voadidy hatrany amin'ny fetra mifehy; nefa tsy ho rava ireo. Ny lainga sy ny hetsi-po rehetra ary ny tsindrona vokatry ny vanim-paniriana dia hiseho amin'ny làlan'ny saina ao anaty "nidina" ho any amin'ny helo. Ny afon'ny afobe dia hitombo hatrany satria ny saina kosa manohitra azy na hampiakatra azy ireo. Rehefa mandà ny hanome fahafaham-po na manome lalana ny faniriana azy tsirairay ny saina, ary rehefa mandà ny tsy hanaiky ny fikomiana na faniriana hanao firaisana izy, dia nirehitra ny fahamaizana ary nirehitra ny afo. Saingy tsy mihena ny fijaliana, fa eo amin'ny toerany dia misy ny fahafaham-po sy fahatsapana ny hodorana sy ny tsy fisian'ny fahazavana, izay mampatahotra toy ny afo mahamay indrindra. Ny tany manontolo dia lasa helo. Ny fihomehezana dia toy ny kitapo foana na ny fisentoana. Ny olona dia mety ho toa ny adala na adala mamitaka izay manenjika ny alokalony na manao lalao tsy misy ilany azy ary ny ain'izy ireo toa miha maina. Na dia ao anatin'ny fotoana maharary indrindra aza dia ho fantatry ny saina fa afaka miatrika ny fitsapana rehetra, ny fitsapana ary ny fahoriana rehetra izy, na tsia, ary tsy hahomby, raha tsy mamoa izy io, ary handresy izany raha manantona.
Ny devoly hiady dia tsy ao anaty vatan'olona na lehilahy hafa. Ny devoly izay tokony hiady sy resena dia ao amin'ny vatan'ny olona iray. Tsy misy olona na vatana hafa noho ny an'ny tena tsy omena tsiny an'izay nanohitra ny devoly ary efa niditra ny helo. Ny fiheverana toy izany dia fitaka ataon'ny devoly, izay manandrana mandà ny saina amin'ny làlan-kaleha sy hanakana ilay iray ady tsy hahita ny tena devoly. Rehefa manome tsiny ny iray izay niaretany ny iray dia azo antoka fa tsy hiady amin'ny tena ady. Hita izany fa miezaka ny mandositra izy na miaro tena amin'ny afo. Mijaly amin'ny fireharehana sy ny fitiavan-tena izy, fa raha tsy izany dia feno rahona ny fahitany ary tsy afaka hanohy ny ady izy, dia lasa nandositra.
Ho fantatry ny saina fa raha mamoa sy manome vahana ny hetaheta ny sain'ny saina na ny faniriany fahefana, dia tsy afaka ao anatin'izany fiainana ara-batana izany dia lasa tsy mety maty ary mahazo fahafahana. Saingy ny saina izay vonona dia mahalala fa raha tsy manaiky ny sain'ny sainy na ny finiavana, dia ao anatin'io fiainana io no mandresy ny devoly, mandositra ny helo, mandresy ny fahafatesana, lasa tsy mety maty ary hanana fahafahana. Raha mbola afaka mijaly any amin'ny afobe ny saina dia tsy mendrika ny ho faty tsy mety maty. Ny ao an-tsaina na ao an-tsaina na miaraka amina saina izay mety hiharan'ny afobe-afo dia tsy mety maty tsy mety maty ary tsy maintsy hodorana mba tsy ho faty tsy tonga saina. Tsy maintsy mandalo ny afobe ary tsy maintsy may ny afony mandra-pandoroana azy rehetra izay afaka mandoro. Ny asa dia tsy vitan'ny olona an-tsitrapo atao, mazoto ary misaina ary tsy misy famerimberenana. Tsy misy marimaritra iraisana. Ny helo dia tsy mandona olona ary malan'ny ankamaroan'ny lehilahy. Ireo izay vonona dia hiditra ao ary handresy azy.
Amin'ny isa desambra, ny Tonian-dahatsoratra dia momba ny ANKAFAHO.